ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့က စိတ်ဖိစီးမှုတွေပြေပျောက်စေနိုင်… – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတော်တော်များများကလည်း သူတို့ချစ်သူကောင်လေးရဲ့အ၀တ်အစားတွေယူဝတ်ရတာ သဘောကျကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်!
လေ့လာချက်တွေအရ ရေမွှေး၊ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး ဘာတစ်ခုမှဆွတ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ အကျီကိုယူဝတ်တာ၊ဒါမှမဟုတ်အကျီကိုမွှေးကြည့်တာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေပြေပျောက်စေတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဘယ်လိုလေ့လာကြည့်ခဲ့တာလဲဆိုရင် ၂၄ နာရီလုံး ရေမွှေး၊ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး၊တစ်ခြားအမွှေးနံ့သာဘာတစ်ခုမသုံးထားပဲ၊ဆေးလိပ်နံ့စွဲမှာစိုးလို့ ဆေးလိပ်တောင်မသောက်ခိုင်းပဲ ၀တ်ခိုင်းထားတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့အကျီကို အမျိုးသမီးတွေကို ၀တ်ခိုင်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါ
ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးရဲ့အကျီကို ၀တ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေက တစ်ခြားသူစိမ်းယောက်ျားလေးတွေရဲ့ရှပ်အကျီကိုဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေထက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့ကိုမှတ်မိနေတယ်။ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့ရနေတာဟာ
စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသလို သူတို့ကိုယ့်အနားမှာရှိမနေရင်တောင် သူတို့ရဲ့ အ၀တ်အစား၊ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခု ကိုယ့်မှာရှိနေရင် ပိုပြီးလုံခြုံသွားသလို၊သန်မာသွားသလိုခံစားရစေတယ်လို့လည်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဒီစာဖတ်ပြီး ချစ်သူဆီက ရှပ်အကျီတစ်ထည်လောက် တောင်းချင်နေပြီမဟုတ်လား?? (စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့အောင်လို့ပါ :P)